मधेशमा ओली, ठाकुर र राउत मिल्ने -
मधेशमा ओली, ठाकुर र राउत मिल्ने
काठमाडौं । दलहरु चुनावको तयारीमा लागिसकेका छन् । २०७९ सालको मंसिरभित्र चुनाव हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।सत्तागठबन्धनका केही घटक वैशाख या जेठभित्र चुनाव गर्ने पक्षमा छन् ।
२०७९ सालमा तीन तहको चुनाव हुनेछ । पहिले प्रतिनिधि सभा कि स्थानीय चुनाव ? यो प्रश्न तेर्सिएको छ । चुनावमा बहस चल्दै गर्दा दलहरुको ध्यान मधेश प्रदेशमा बढी गएको छ । ८ जिल्ला रहेको मधेश र समथर भूभागहरुमा निर्वाचन क्षेत्र बढी छन् । त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन दलहरु सक्रिय भएका छन् । उनीहरुले चुनावी गठबन्धनको पूर्वाभ्यास गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी मधेशमा मजबुत छ । नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धनमा रहेकाले जसपा चुनावमा पनि तालमेल गर्ने दाउमा छन् । जसपाको काँग्रेससँग भरसक नभए माओवादी र नेकपा एससँग गठबन्धनको सम्भावना देखिदैछ ।मधेशमा नेकपा एमालेको फरक रणनीति देखिन्छ । एमालेले मधेशमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र सीके राउत नेतृत्वको
जनमत पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने संकेतहरु गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभाको १२ माघमा हुने चुनावमा एमाले र लोसपाबीच तालमेल भएको छ । यसलाई भविष्यमा हुने चुनावमा पनि तालमेलको संकेतको रुपमा लिइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सीके राउतसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । महन्थ ठाकुरसँग पनि ओली सरकारमा हुँदा नै सहमति बनाएका थिए ।
उनले ठाकुरले उठाएको मागको सम्बोधन पनि गरेका थिए । यसले यी शक्तिबीच निकटता बढाएको थियो ।
धरानका नवनिर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङले लिए
जजिराको विमान अवतरणको क्रममा चरासँग ठोकियो
‘मोदीको भ्रमणले बुद्ध जन्मस्थानबारे भ्रम समाप्त
बालेन १७ हजार मत अन्तरले अगाडि,
निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य,
बालेन शाहले जिते गहना किन्दा छुट
22 घण्टा अगाडि
एमाले नेतृत्बाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर
भारतले गहुँ निकासीमा लगायो प्रतिबन्ध, नेपाली
निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा पनि वृद्धि
बालेन शाहले जिते गहना किन्दा छुट अफर !
एमाले नेतृत्बाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको खुलासा
भारतले गहुँ निकासीमा लगायो प्रतिबन्ध, नेपाली मैदा मिल समस्यामा
सुनको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
विजय जुलुसको गाडी दुर्घटना: २४ जना घाइते, ६ जनाको अवस्था गम्भीर
सार्वजनिक यातायातको भाडा फेरि बढ्यो